12th May, 2021 Wed १२:०४:१८ मा प्रकाशित
अकबाल अहमत शाह
हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नै निर्विवाद, निष्कलङ्क, संन्त र शालिन व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँमा पचासौं वर्ष राजनीति गरेको अनुभव छ । उहाँले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि निकै संघर्ष गर्नुभएको छ ।
अहिलेको अवस्थामा संघीय प्रतिनिधि सभाको औचित्य समाप्त भइसकेको छ । प्रतिनिधिसभाको गरिमा बाँकी रहेन । अहिलेका यी पार्टीका नेताबाट संसद अब अगाडि बढ्न सक्दैन ।
नेपाली कांग्रेसले पनि प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सकेन । माओवादी पनि पार्टी र मुलुकप्रति जिम्मेवार भएन । यी दुई पार्टी मुुलुकको नेतृत्व गर्न असमर्थ भइसकेको छ । यी नेताहरुले नै केपी ओलीलाई निरकुंश बन्न छुट दिएका हुन् । देउवा प्रतिपक्ष दलका नेता भन्ने संवैधानिक परिष्दमा नजाने अनि संवैधानिक अंगहरुमा नियुक्ति गर्न आफ्ना मान्छे भर्ना गर्ने यो कस्तो दोहोरो चरित्र हो ? प्रधानमन्त्रीको कार्यशैलीको विरोध पनि गर्ने अनि राज्यको सुविधान पनि हत्याउने ?
यसबीचमा प्रचण्डको भूमिका पनि राम्रो देखिएन । केपीको कार्यशैली अवैधानिक थियो, गणतन्त्र, लोकतन्त्र विरोधी थियो भने उहाँले किन समर्थन फिर्ता लिनु भएन ? प्रतिनिधि सभाको जुन गरिमा थियो प्रचण्ड–देउवाले सत्ताको लोभमा समाप्त पारे । प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्नु, पदलोलुपता देखाउनु, ओलीको कार्यशैलीको विरोध गर्न नसक्नु नै अहिलेको अवस्था सिर्जन हुनु हो । अब यस गतिहिन संसदलाई विघटन गरेर ताजा जनादेशमा जानुपर्छ ।
अहिलेको यस विकराल अवस्थामा मुलुकलाई निकास दिन एउटा निष्पक्ष, स्वस्थ्व व्यक्तिको आवश्यक रहेको छ । जसले गणतन्त्र, लोकतन्त्र बुझेको छ, नेपालको इतिहासमा संसदीय प्रणालीलाई अभ्यासमा ल्याउन र संसदीय प्रणालीलाई राम्रोसँग व्यवस्थापन गर्न सक्ने व्यक्तिले नयाँ सरकारको नेतृत्व लिनु पर्छ ।
त्यसको लागि हाम्रा पार्टीका अध्यक्ष महन्त ठाकुर नै निर्विवाद, निष्कलङ्क, संन्त र शालिन व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँमा पचासौं वर्ष राजनीति गरेको अनुभव छ । उहाँले प्रजातन्त्र र लोकतन्त्र प्राप्तिको लागि निकै संघर्ष गर्नुभएको छ । आजसम्म उहाँमा कुनै किसिमको लाञ्छना र आरोप लागेको छैन । उहाँ प्रधानमन्त्रीको हैसियत राख्न सक्ने व्यक्ति हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा यदि सरकार बन्छ भने धेरै राम्रो हुन्छ । मुलुकले एउटा गति पनि लिन्छ । उहाँकै नेतृत्वमा निष्पक्ष चुनाव सम्भव रहेको छ ।
तर, हाम्रो पार्टीभित्र अराजक, व्यक्तिवादी संक्रिण राजनीति बोकेका नेताहरुले ठाकुर जीलाई अगाडि बढ्न दिनुभएको छैन । लोकतन्त्र, गणतन्त्रको नाममा कलंङ्कित त्यस्ता व्यक्ति हाम्रा पार्टीमा छन् । त्यस्ता व्यक्तिको म घोर भत्र्सना गर्छु ।
(साह जसपाका नेता हुनुहुन्छ )